VaGwisai neVamwe Vavo Votarisirwa Kutarirwa Murango Wavo neChitatu
Kurume 20, 2012
Vaimbova mumiriri weHighfield muparamende, VaMunyardzi Gwisai, nevamwe vavo vashanu vakabatwa nemhosva neMuvhuro yekuda kufurira vamwe kuti vaite mhirizhonga, vakumbira dare ramejasitiriti kuti vabhadhariswe faindi.
Vachisvitsa chikumbiro ichi kudare, gweta riri kumirira vasungwa ava, VaAlec Muchadehama, vati aka ndekekutanga kuti vasungwa ava vabatwe nemhosva, nokudaro vanofanira kuti vabhadhariswe faindi sezvo mutemo uchivapa mukana wekubhadhara faindi yemari inoita mazana mashanu emadhora kana dare risina kuvatongera kupika jeri.
VaMuchadehama vati vasungwa ava, avo vanosanganisira vaimbove mutungamiri weZINASU, VaHopewell Gumbo, Muzvare Antonaetar Choto, nhengo yeZINASU, VaWelcome Zimuto, nhengo yeUnited Food and Allied Workers Union, VaEdson Chakuma, pamwe nenhengo ye Zimbabwe Labour Centre, VaTatenda Mombeyarara, vakatopika jeri kare kuburikidza nenguva yavakagara mujeri nyaya yavo isati yatongwa uye kutochwa kwavanonzi vakaitwa nemapurisa vari muhusungwa.
Vaenderera mberi vachiti mifananidzo yemavhidhiyo yezvakaitika kuEgypt nekuTunisia yakawonekwa musi wa 19 Kukadzi pavakasungwa yaiva yekuvaraidza nguva sezvo vamwe vaifanira kuzotaura pamusangano uyu vaiva vasati vasvika kwete kuti vaida kukurudzira vanhu vakange vauya kumusangano uyu kuti vapandukire hurumende.
Asi gweta rehurumende, VaEdmore Nyazamba, varamba kuti vasungwa ava vabhadhariswe faindi vachiti mhosva yavakabatwa nayo yakakura zvikuru.
VaNyazamba vati vasungwa ava havafanire kubhadhariswa faindi vachiti izvi zvikaitwa zvinoshoresa mafambisirwo anoitwa nyaya mumatare munyika uye vati pane mukana wekuti vasungwa ava vanogona kupara dzimwe mhosva dzakadai sezvo hurumende iri kutonga pari zvino iriyo yavaida kupidigura.
VaNyazamba varambawo mashoko ekuti vasungwa ava vakatochwa vachiti hapana humbowo hwakasvitswa kudare hunoratidza izvi. Asi VaMuchadehama vati vasungwa ava vakatokwidza nyaya yemapurisa akavatocha kumatare edzimhosva uye vati hakasi kekutanga kuti nyaya iyi itaurwe.
VaNyazamba vati dare harifanire kuteerera zviri mumapepa ari mudare anoratidza kuti Muzvare Choto vanorwara akabva kunana chiremba vemuno neku South Africa mushure mekunge VaMuchadehama vati Muzvare Choto vanorwara nechirwere che asthma saka havakodzere kuti vange vachiendeswa kujeri. VaNyazamba vati mapepa aya haana zvidhindo zvinoratidza mapepa aya haasi emubikirwa.
VaNyazamba vati Zimbabwe inyika yaimbotongwa ne Britain sezvakaita Egypt uye mamiriro akange akaita zvinhu munyika panguva yakasungwa vasungwa ava akange akafanana neakanga akaita kuEgypt.
Vati varatidiziri ava vakange vakaronga kuratidzira vachibvira paAfrica Unity Square yavati yakafanana neTahir Square yeku Egypt kwakatangira kuratidzira munyika iyi. Vaenderera mberi vachiti vasungwa ava inhengo dze International Socialist Organization, kana kuti ISO, iyo yavapomera mhosva yekukonzeresa kuratidzirwa kwakaitwa kuEgypt.
VaNyazamba vati kusati kwave nekudzamiswa kwepfungwa muvanhu kana kuti civilization, vanhu vaitemwa nematombo kusvika vafa kana vapara mhosva dzakaita sedzakaparwa nevasungwa ava. Vaenderera mberi vachibatabata nyaya dzemubhaibheri vakafananidza VaMugabe na Moses.
VaNyazamba vati vasungwa ava vanofanirwa kugariswa mujeri kwemakore gumi sezvakataurwa mumutemo weCriminal Law, Codification and Reform Act uyo unoti munhu anobatwa nemhosva yakadai anosungirwa kugara mujeri kwemakore asingadariki gumi kana kubhadhara faindi yemari isingadariki madhora zviuru zviviri.
Asi VaMuchadehama vati zvose zvataurwa naVaNyazamba hazvina hwaro nokudaro vakurudzira dare kuti riteerere chikumbiro chevasungwa ava.
Mutongi wedare, VaKudakwashe Jarabhini, vati vachatura mutongo wavo neChitatu panyaya iyi. Mushure mekunge mutongi vataura izvi, VaNyazamba vakumbira dare kuti vasungwa vakabatwa nemhosva ava vavharirwe mujeri vachiti kubatwa kwavakaitwa nemhosva kunogona kukonzera kuti vatize kuzopihwa mutongo wavo.
Asi VaMuchadehama vasati vapindura, VaJarabhini vabva vaudza VaNyazamba kuti vaifanira kunge vakasvitsa chikumbiro ichi kudare neMuvhuro pakaturwa mutongo wakabata vasungwa ava vaine mhosva.
MDC rinotungamirwa nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, bato reMDC99 uye masangano akazvimirira ashora zvikuru danho rekubata nemhosva kwaVaGwisai nevamwe vavo.
Mumashoko ayo kuvatori venhau, MDC-T yati zviri pachena kuti bato reZanu-PF riri kushandisa matare kuyedza kutyisidzira nekumbunyikidza kodzero dzevanhu munyika.
Mutungamiri weMDC99, VaJob Sikhala, vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuratidzira kuti hudzvinyiriri uhu husaenderere mberi.
Masangano akazvimirira oga, ZCTU, uye sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union ashorawo mabatirwo akaitwa nyaya iyi.
Mutauriri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora, vanoti zvoitwa neZanu-Pf ichishandisa matare zvinonyadzia.
Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, VaDewa Mavhinga, vakurudzira vanhu kuti vabatane mukuramba kumbunyikidzwa nedivi reZanu PF muhurumende.